चीन पालतू कुकुर ठूलो मल संग्रह उपकरण पोप पिकर कारखाना र निर्माताहरू मियासेन
उत्पाद नाम: घरपालुवा जनावर कुकुर ठूलो मल संग्रह उपकरण पोप पिकर
विवरण:फैशनेबल मोडलि,, मोटाई पर्यावरणीय संरक्षण सामग्री, अक्सीकरण प्रतिरोध, जंग प्रतिरोध। ह्यान्डलको साथ, होस्ट बोक्नका लागि सुविधाजनक
उपयोग: प्रयोग गर्दा, कागजको पपको सतहलाई छोप्नुहोस्, र त्यसपछि यसलाई समात्नुहोस् र यसलाई खारेज गर्न शौचालय प्रयोग गर्नुहोस्। वा बजारमा बेचेको अन्य फोहोर बेल्ट प्रयोग गर्नुहोस् शौचालयको भित्री भाग ढाक्न र यसलाई तल तान्नुहोस्। यो सुविधाजनक छ, सेनेटरी र चिन्तामुक्त। यो घर प्रयोग र यात्रा को लागी उपयुक्त छ।
सुविधाहरू: कुकुरको मलमूत्र सफा गर्न मालिकलाई सुविधाजनक हुन्छ। कागज तौलिया प्रयोग गरेर यो सजिलैसँग लिन सकिन्छ। जब त्यहाँ फोहोरको वरिपरि हुँदैन, मल बक्समा अस्थायी रूपमा भण्डार गर्न सकिन्छ, जुन हराउने छैन र कुनै स्वाद हुँदैन। यो सफा र स्वच्छ छ, र मालिकको हातको पाल्तु मलका साथ कुनै सम्पर्क छैन। कागज तौलिया वा प्लास्टिकको झोला प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।
रंग: रोयल निलो, कालो
आकार cm सेन्टीमिटर） ： लम्बाई: cm० सेमी, क्लिप: १.5. * * १२. * * १० सेमी, ह्यान्डल चौडाई: १२..5 सेमी
सुविधा: तपाईंको घरपालुवा जनावरको मलमूत्र सफा गर्नुहोस्
धुने विधि: पानी र सुख्खा संग कुल्ला, कृपया छुट्टै सफा गर्नुहोस्। मानव आईटमहरु संग न धुनुहोस्
भण्डारण विधि: एक सुन्दर र सुक्खा ठाउँमा भण्डार गर्नुहोस्। कृपया यसलाई अलग-अलग भण्डार गर्नुहोस्, मानव उत्पादनहरूका साथ होईन
कृपया नोट गर्नुहोस्: यो उत्पादन विशेष रूपमा हाम्रो कम्पनी द्वारा डिजाइन र उत्पादन गरिएको हो। यो उत्पादन अनुकूलन समर्थन गर्दैन। कृपया घरपालुवा जनावरको उत्सर्जनलाई समयमै डस्टबिनमा हाल्नुहोस्। फोहोर नगर्नुहोस्। म्यानुअल मापन त्रुटि, कृपया वास्तविक वस्तुलाई सन्दर्भित गर्नुहोस्। कृपया धुनुहोस् र धुने विधि र भण्डारण विधि अनुसार भण्डार गर्नुहोस्।कृपया उत्पादनलाई हानी हुनबाट बचाउन हार्डकोट ढकढक्याउनु हुन्न। यदि तपाईं उत्पादनसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने कृपया ग्राहक सेवालाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
अघिल्लो: घरपालुवा जनावर बिरालो साधारण डिस्क कूल र हास्यास्पद बिराला टेबल पालतु बिरालो बिल्लीको बच्चा बिल्ली वयस्क बिराला ग्रीष्मकालीन कूल सानो बिराला टेबल बिरालो खिलौना
अर्को: बुढेसकालका लागि बत्ती चितासँग हिंड्ने स्टिक तह
घरपालुवा जनावरको लुगा बिग डग कोट शरद र शीतकालीन लुगाहरू
नयाँ एंटी उत्पीडन पुरुष कुकुर फिजिकल पंत ...
ठुलो कुकुरका कपडा लैब्राडोर मध्यम आकारको ठूलो कुकुर ...